ပထမအကြိမ် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း | MYANMAR ORTHOPAEDIC SOCIETY
ပထမအကြိမ် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
Home » ပထမအကြိမ် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
နေ့ရက် -> ၂၉-၁၀-၂၀၁၅ (ကြာသာပတေးနေ့)
နေရာ -> သင်ကြားရေးခန်းမ၊အရိုးအထူးကုဆေးရုံကြီး၊(၆၂)လမ်း-မန္တလေး။
အချိန် -> နေ့လည်(၂)နာရီ
၁။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးကျော်မြင့်နိုင်
၂။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးမိတ်
၃။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးမြင့်သောင်း
၄။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးမောင်မောင်ထွေး
၅။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးခရစ်စတိုဖာဆန်အားမောင်
၆။ ပါမောက္ခဗိုလ်မှုးကြီး ကြီးမြင့်
၇။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်မြင့်
၈။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးစန်းလှိုင်
၉။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးဝင်းက
၁၀။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်နွဲ့
၁၁။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးအောင်မျိုးဝင်း
၁၂။ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးထင်အောင်လင်း
၁၃။ ဗိုလ်မှုးကြီး အောင်မင်း
၁၄။ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးဝင်းဇော်
၁၅။ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးအောင်နိုင်
၁၆။ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးခိုင်စိုးထွန်း
၁၈။ တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဦးသန်းဝင်း
​အ​စည်း​အ​ဝေး​ကို Society President ​ပါ​မော​က္ခ​ဒေါက်​တာ ​မောင်​မောင်​ထွေး. ​အ​ဖွင့်​အ​မှာ ​စ​ကာြး​ဖင့် ​စ​တင်​ဖွင့်​လှစ်​ပါ​သည်၊ ​အ​ခမ်း​အ​နား ​အ​စီ​အ​စဉ်​များ ​ဖတ်​ကြာြး​ခင်း။ Format ​ပုံ​စံ​များ ​အ​တိုင်းြ​ပု​လုပ်​ခင်း​များ ​မ​လုပ်​တော့​ပဲ ​ရင်း​ရင်း​နှီး​နှီး ​ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း ​ဆွေး​နွေး​ရန်ြေ​ပာ​ကြား​ပါ​သည်၊ ​အ​သင်း​တာ​ဝန်​များ​နှင့် ​ပါတ်​သတ်၍ ​ရှေ့​ကာ​လ​တွင် ​လူ​ငယ်။ ​လူ​သစ်​များ​ပါ​ဝင်​လာ​အောင် ​တာ​ဝန်​ပေှးု ​ဆောင်​ရွက်​စေ​လို​ကြောင်းြေ​ပာ​ကြား​ပါ​သည်၊ New Idea ​များ၊ New concept ​များ​ရ​ရှိ​အောင် ​စဉ်း​စား​တွေး​ခေါ်​သော ​အ​နေ​အ​ထား​ရ​အောင် ​စည်း​ရုံး​လှုံ့ဆော်​လို​ကြောင်းြေ​ပာ​ကြား​ပါ​သည်၊ ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး​မှ ​ယ​နေ့ ​ဆွေး​နွေး​မည့်​ခေါင်း​စဉ်​များ​ကို ​ဖတ်​ကြားဆွေး​နွေး​ပေး​ပါ​ရန် ​ဖိတ်​ခေါ်​ပါ​သည်။
၁။ (၄၈)ြ​ကိ​မ်ြေ​မာက် Annual General Meeting ​နှင့် Annual Scientific Meeting ​ကိ​စ္စ
​မန္တလေး​တွင် (၂၀၁၆)​ခု​နှစ် ​နို​ဝင်​ဘာ​လ(၄၊၅၊၆)​ရက်​တွင် ​ကျင်း​ပ​မည်​ဖြစ်​ပါ​သည်။Theme ​အ​တွက် ​ခေါင်း​စဉ်​များ​ကို ​ကျောင်း​အ​လိုက် ​ရွေး​ချယ်ြ​ပု​စု၍ ​နို​ဝင်​ဘာ​လ(၁၅)​ရက်​တွင် ​ပေး​အပ်​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။ ​ကျင်း​ပ​ရေး​ဦး​စီး​ကော်​မ​တီ​ကို ​နောက်​အ​စည်း​အ​ဝေး​များ​တွင် ​ဖွဲ့​စည်း​ရန်​နှင့် ​ကျင်း​ပ​ရေး ​လုပ်​ငန်း​စီ​မံ​ချက် (Microplan) ​ကို ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး​မှ ​ရေး​ဆွဲ​ရန်​ဖြစ်​ပါ​သည်။Acadamic Comettee ​မှ ​ညီ​လာ​ခံ​အ​တွက် ​စာ​တမ်း​များ​ရ​ရှိ​အောင် ကြို​တင်​နိုး​ဆော်​ရန်ြ​ဖစ်​ပါ​သည်။
ASEAN Orthopaedic Association(AOA) ​နှင့် Asia Pacific Orthopaedic Association (APOA) ​တို့၏​အ​ဖွဲ့​ဝင်​ကြေး US ​$1500 ​စီ​ကို (၂၀၁၅)​ခု​နှစ်​အ​တွက် ​ပေး​သွင်ြး​ပီြး​ဖစ်​ကြောင်း ​ပါ​မောက္ခ​​ဒေါက်​တာ​နွဲ့ ​မှ​တငြ်​ပ​ပါ​သည်။ ASEAN Council ​သို့ ​ကျင်း​ပ​မည့်​ရက် ​ညှိ​နှိုင်း​ရန် ​ဥ​​က္ကဌ​မှ ​တာ​ဝန်​ယူ​ပါ​သည်။
၂။ ​ရုံး​အ​ဖွဲ့​နှင့် ​ရုံး​ခန်း​ကိ​​စ္စ
​ရန်​ကုန်​ရုံး​အ​ဖွဲ့​နှင့် ​ရန်​ကုန်​စာ​ရေး ​ဦး​တင့်​ဇော်​ကို ​ချီြး​မှင့်​ငွေ (၅)​သောင်း​ခြွဲ​ဖင့် (၁)​နှစ် ​ဆက်​လက်​ခန့်​ထား​ရန် ​ဆုံးx​ဖတ်​ပါ​သည်၊ ​ဖုန်း​နံ​ပါတ်(၀၁-၂၃၀၄၀၄၉)​ကို ​ရန်​ကုန်​တွင် ​ဆက်​လက် ​အ​သုံြး​ပု​ပါ​မည်၊ ​မန္တ​လေး​တွင် Permanent Staff ​တစ်​ဦး​ကို ​အ​ခြေ​ခံ​လ​စာ(၁)​သိန်းဖြင့် လျှောက်လွှာ ​ခေါ်​ယူ​ခန့်​ထား​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်၊ ​ရုံး​ခန်း​နှင့် ​နေ​ရာ​ထိုင်​ခင်း​ကစ္စ​ကို ​မန္တ​​လေး​မှ ​စီ​စဉ်​ရန် ဖြစ်​ပါ​သည်။ www.myanmarorthopaedicsociety.org website ​ကို ​ဒေါက်​တာ​ဟိန်း​လတ်​ဝင်း ​နှင့် ​ဆက်​သွယ်၍ update ​လုပ်​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။ ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး၏ e-mail ​ကိုsec.myanmarortho@gmail.com ​အြ​ဖစ် ​အ​သုံြး​ပု​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
ြ​မ၀​တီ​ဘဏ်၊ရန်​ကုန်တွင် ​အပ်​နှံ​ထား​သော ​အ​သင်း၏​ ရန်​ပုံ​ငွေ (၆၅၂၇၂၅၀.၈၃)​ကျပ် ​နှင့် ​က​မ္ဘောဇ(​ဗ​ဟို)။ ​ရန်​ကုန်​တွင် ​အပ်​နှံ​ထား​သော ​အ​မေ​ရိ​ကန်​ဒေါ်​လာ(၃၁၉၁၀)​နှင့် ​ငွေ​သား​လက်​ရှိ ​အ​မေ​ရိ​ကန်​ဒေါ်​လာ(၃၈၈၆) (​စု​စု​ပေါင်း – ၃၅၇၉၆ US$) ​အား ​ယ​ခင်​ဘ​ဏ္ဍာရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​နွဲ့ (၁၂/​အ​စ​န(​နိုင်)၁၃၄၅၇၀) ​နှင့် ​ဒေါက်​တာ​သန့်​စင်​နိုင်(၁၂/​ဥ​က​တ(​နိုင်)၀၀၀၁၉၁)​တို့​ထံ​မှ ​ယ​ခု ​အ​လုပ် ​အ​မှု​ဆောင်​အ​ဖွဲ့​သစ်၏ ဘဏ္ဍာရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​ဦး​အောင်​နိုင်(၉/​မ​န​မ(​နိုင်)၀၈၈၈၀၈) ​နှင့် ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​ဦး​ဇော်​မင်း​ဟန်(၈/စ​လ​န(​နိုင်)၀၄၉၃၂၆) ​တို့​ထံ ​လွှဲပြောင်း​ပေး​အပ်​ရန်​အ​တွက် ​လျှောက်​လွှာ​​တင် ​ဆောင်​ရွက်​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
၄။ SIG အဖွဲ့များမှ တင်ပြခြင်း
Spine SIG အ​ဖွဲ့​အ​တွက် ​ပါမောက္ခ​ဒေါက်​တာ​ဦြး​မင့်​သောင်း​မှ ​တင်ြ​ပ​ရာ​တွင် AO Spine Principle Course ​ကို (၂၀၁၅)​ခု​နှစ် ​ဒီ​ဇင်​ဘာ​လ(၅-၆)​တွင်ြ​ပု​လုပ်​မည်​ဟု ​တင်​ပြ​ပါ​သည်။ (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်​တွင် Metronic Clinical Fellow (၂)​ဦး၊ Cadaver Course (၂)​ခု၊Interactive Spine Forum ​ကျင်း​ပ​ရန်​နှင့် Spine Operation Registry ပြု​လုပ်​ထာြး​ပီးြ​ဖစ်​ကြောင်း​တင်ြ​ပ​ပါ​သည်။(၂၀၁၆)​ခု​နှစ် AO Spine Course ကို 48th Orthopaedic AGM, ASM နှင့်အတူ မန္တလေး​တွင် ​ကျင်း​ပ​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
Trauma SIG ​အ​ဖွဲ့​မှ​တင်​ပြ​ရာ​တွင် ​ASIA Pacific AO Trauma ​ကို (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်၊ ​စက်​တင်​ဘာ​လ(၆-၇)၊ (၂၀၁၆)​ခု​နှစ် ​AOAF ​ကို May ​လ​တွင် Tibia, Femur Nailing course ​နှင့် Life Surgery or advanced Cadaver workshop ​ကို Chang Mai ​တွင် ​ကျင်း​ပ​မည်​ဖြစ်​ကြောင်း ​တငြ်​ပ​ပါ​သည်။ Trauma Fellow ​အ​တွက် 6months Fellow ​ကို Tan Tock Seng Hospital (၂)​ဦး။ Malaya University (၂)​ဦး ​စေ​လွှတ်​ရန်၊ Joint Fellow Ship (၁)​ဦး​ကို Kuching, Malaysia ​တွင် (၁)​လ မှ (၃)​လ​ထိ (၂)​ဦး ​စေ​လွှတ်ရန် ​စီ​စဉ်​ထား​ရှိ​ပါ​သည်။
Hand SIG မှ တငြ်​ပ​ရာ​တွင် (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်​တွင် Basic Hand Refresher Course (၁)​ခု၊ Microsurgery; Basic Instructional Course on Microsurgery ​ကျင်း​ပ​ရန်​နှင့် (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်၊ ​ဧြ​ပီ​လ ​နှင့် ​စက်​တင်​ဘာ​လ​တွင်ြ​ပည်​ပ​အ​စည်း​အ​ဝေး​များ ​တက်​ရောက်​ရန် ​စီ​စဉ်​ထား​ပါ​ကြောင်း ​တင်​ပြ​ပါ​သည်။
Paediatric SIG ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​တွင် Deformity correction workshop ​တက်​ရောက်​ရန် ​ရှိ​ကြောင်း ​နှင့် (၂၀၁၆)​ခု​နှစ် ​APOA Conference, Paediatric session ​တက်​ရောက်​ရန်​ရှိ​ပါ​သည်။SIG group ​များ၏ Meeting ​နှင့် Tranining ​ များ​ကို Year Calendar ​တွင် Incorporateြ​ပု​လုပ်၍ Programe ​ဆွဲ​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ကြ​ပါ​သည်။
၅။ “မြန်မာ​နို​င်င်​ငံ ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​အ​ဖွဲ” ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စ
မြန်​မာ​နိုင်​ငံ ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​အ​ဖွဲ့ ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​နှင့် ​အြေ​ခ​ခံ​စည်း​မျဉ်း​များ(​မူ​ကြမ်း) (၂၀၁၅)​ခု​နှစ်​ကို (၄၇) ကြိမ်ြေ​မာက်ြ​မန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​ရိုး​ဆ​ရာ​ဝန်​ညီ​လာ​ခံ ​နှစ်​ပတ်​လည်​အ​သင်း​သား​စုံ​ညီ ​အ​စည်း​အ​ဝေး​သို့ ​တင်ြ​ပ​ထားပြီြး​ဖစ်​ပါ​သည်။ ​ဝေ​ဖန်​အကြံ​ပြု​လို​သည်​များ ပြင်​ဆင်​လို​သည်​များ​ကို ​စာဖြင့်​ရေး​သား​ပေး​ပို့​ကြ​ရန် (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်၊ ​ဧြ​ပီ​လ(၃၀)​ရက်​နောက်​ဆုံး​ထား၍ ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး​ထံ​ပေး​ပို့​ရန် ​အ​တွက် ​နှိုး​ဆော်​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
ြ​မန်​မာ​နိုင်​ငံ ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​အ​ဖွဲ့​နှင့်​အ​တူ Myanmar Board of Orthopaedic Surgery ​နှင့် Myanmar Orthopaedic Research Society ​ဖွဲ့​စည်း၍ ​လုပ်​ငန်း​များ​ဆောင်​ရွက်​ရန် ​အ​မှု​ဆောင်​အ​ဖွဲ့​မှ ​ဆုံြး​ဖတ်​ကြ​ပါ​သည်။
၆။ ​အ​ဖွဲ့ဝင်ကဒ် ​များ​ကို Smart Cardြ​ပု​လုပ်ရန်ကိစ္စ
အ​ဖွဲ့​ဝင် (၃၆၄)​ဦး​နှင့် ​ကျောင်း​သား​များ၏ ​အ​ချက်​အ​လက်​များ Year Book ​တွင် ​ပါ​ဝင်ြ​ပီ​ဖြစ်၍ ကုမ္ပဏီ​တစ်​ခု​နှင့် ​ချိတ်​ဆက်ပြီး Smart card ပြု​လုပ်​ရန်၊ Bar Code ​သတ်​မှတ်​ရန်၊Smart card ​မ​ထုတ်​ပေး​မီ CV ​တစ်​ဦး​ချင်း​စီ ​တောင်း​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ကြ​ပါ​သည်။
၇။ ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​သ​မိုင်း ပြုစုခြင်းကိစ္စ
​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​သ​မိုင်း​ကို (၂၀၁၆)​ခု​နှစ်​တွင် (၄၈) ကြိမ်ြေ​မာက် ​ညီ​လာ​ခံ​အြ​ပီး ​ထုတ်​ဝေ​နိုင်​ရေး ​အ​တွက် ​ပါ​မော​က္ခဒေါက်​တာ​ဦး​ခင်​မောင်​မြင့်​မှ (၁၀)​စု​နှစ်​အ​လိုက် ​စု​စည်ြး​ပီး (၂၀၁၅)​ခု​နှစ်၊ ​ဒီ​ဇင်​ဘာ​လ (၁၅)​ရက်​အ​မှီ (​မူ​ကြမ်း) ပြု​စုပြီး​စီး​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၈။ Fellowship ​များ ​ရွေး​ချယ်စေ​လွှတ်ရန်ကိစ္စ
Fellowship ​များ​နှင့် ​အ​စည်း​အ​ဝေး​များ ​တက်​ရောက်​ရန် ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း​စီ​စဉ်​ထား​ရှိ​ပါ​သည်။
Philipine Orthopaedic Associaton Meeting
Chongqing Yuclai China Orthopaedic Association Meeting
Prof. Win Ko,
AP Dr.Soe Win,
AP Dr.Tin Maung Win,
Dr. Aung Moe Kyaw
Kuching Malaysia Sarawak General Hospital
AP Dr. Than Win
Siriraj Hospital Bangkok, Thailand Paediatric Osteotomy Workshop
AOA American Travelling Fellowship
Australia New zealand Travelling Fellowship
Prof. Win Ko
ASEAN Travelling Fellowship Junior
Dr. Tun Tun Lin
ASEAN Travelling Fellowship Senior
Lef Col. Dr. Aung Min
​နိုင်​ငံ​ခြား​သို့ ​ပ​ညာ​တော်​သင် ​ခ​ရီး​စဉ်​သွား​ရောက်​ခဲ့​သော ​အ​ဖွဲ့​များ Report ​နှင့် ​မှတ်​တမ်း ​ဓါတ်​ပုံ​များ​ကို ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး​မှ ​စု​စည်း​ရန် ​နှင့် (၃)​လ​တစ်ကြိမ် ​သ​တင်း​လွှာကို ​ပါ​မော​က္ခ​ဒေါက်​တာ​ဦး​ခင်​မောင်ြ​မင့် မှ​ထုတ်​ဝေ​ပေး​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၉။ 38 th ASEAN Orthopaedic Congress ကိစ္စ
​ယ​ခင်​ကျင်း​ပ​ခဲ့​သော Conference ​များ။ Journal ​နှင့် ​သ​တင်း​လွှာများ​ကို ​စု​ စည်း၍ Computer sever ​အ​တွင်း ​သွတ်​သွင်း၍ Achieve ​များ​အဖြစ် ​စု​စည်း​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
၁။ (၄၈) ကြိမ်​မြောက် ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​အ​ဖွဲ့ ​ညီ​လာ​ခံ​ကို ​နို​ဝင်​ဘာ​လ(၃၊၄၊၅)​ရက်​တွင် ​မန္တ​လေး​တွင် ​ကျင်း​ပ​ပါ​မည်။
၂။ ​ရုံး​အ​ဖွဲ့ (၂)​ဖွဲ့​ကို ​အ​ထက်​မြန်​မြာ​ပည်​နှင့် ​အောက်​မြန်​မာပြည်​အဖြစ် ​ထား​ရှိ​ရန်​နှင့် ​မ​န္တ​လေး​တွင် Office Staff ​တစ်​ဦး ​ခန့်​ထား​ရန်။
၃။ ​ဘ​ဏ္ဍာရေး​မှူး ​ပါ​မော​က္ခဒေါက်​တာ​နွဲ့​နှင့် ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​သန့်​စင်​နိုင်​တို့​ထံ​မှ ​အ​မှု​ဆောင် အ​ဖွဲ့​သစ်၏ ဘ​ဏ္ဍာရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​အောင်​နိုင်​နှင့် ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး ​ဒေါက်​တာ​ဇော်​မင်း​ဟန် ​တို့​ထံ လွှဲ​ပြောင်း​ရန် ​ပ​ထ​မ​အကြိမ်(​ယ​ခု) ​အ​စည်း​အ​ဝေး​မှ ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၄။ SIG group ​များ၏ Meeting ​နှင့် Training Programe ​များ​ကို Year Calendar ​တွင် Incomporate​ လုပ်​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၅။ြ​မန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​အ​ဖွဲ့ ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​နှင့် ​ပတ်​သက၍ ​အကြံ​ဥာဏ်ပေး​ဆုံးဖြတ်​နိုင်​ရန် ဧြ​ပီ​လ(၃၀)​ရက်​အ​တွင်း ​စာ​ရေး​သား၍ ​အကြံ​ ဥာဏ်​ပေး​ကြ​ပါ​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၆။ Myanmar Board of Orthopaedic Surgery ​နှင့် Myanmar Orthopaedic Research Society ​ဖွဲ့​စည်း၍ လုပ်​ငန်း​များ ​အ​ကောင်​အ​ထည်​ဖော်​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
၇။ ​အ​ရိုး​ရော​ဂါ​ပ​ညာ​သ​မိုင်း​ကို (၁၀)​စု​နှစ်​လိုက်​ပြု​စု၍ (၂၀၁၅)​ ဒီ​ဇင်​ဘာ​လ(၃၁)​အ​မီ ​မူ​ကြမ်ြး​ပု​စုပြီး​ရန် ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၈။ Fellowship Programme ​များ​ကို ​အ​မှု​ဆောင် ​အ​ဖွဲ့​မှ ​လူ​ရွေး​ချယ်၍ ​စေ​လွှတ်ရန် ​စီ​စဉ်​ပါ​သည်။ President မှ ​ဝန်ြ​ကီး​ဌာ​န​သို့ ​ဆက်​သွယ်၍ စာ​ရေး​သား ကြို​တင် တင်​ပြ​ရန်​နှင့် ​လမ်း​ညွန်မှု တောင်း​ခံ​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၉။ ​နိုင်​ငြံ​ခား​သို့ ခ​ရီး​စဉ်​နှင့် ​ပ​ညာ​တော်​သင်​သွား​ရောက်​ခဲ့​သော ​အ​ဖွဲ့​များ Report ​နှင့် ​မှတ်​တမ်း​ဓါတ်​ပုံ​များ ပေး​ပို့​ပါ​ရန် ​နှင့် (၃)​လ​တစ်ကြိမ် ​သ​တင်း​လွှာထုတ်​ဝေ​ရန် ​ဆုံြး​ဖတ်​ပါ​သည်။
၁၀။ ​အ​ဖွဲ့​ဝင်​များ ​ထံ​မှ ​တစ်​ဦး​ချင်း​စီ CV ​တောင်း၍ Member Master Card ပြု​လုပ်​ပေး​ရန် ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
၁၁။ ​ယ​ခင်​မှတ်​တမ်း​များ Conference ​များ၊ Journal ​နှင့် ​သ​တင်း​လွှာ များ​ကို ​စု​စည်း၍ Computer sever ​အ​တွင်း ​သွတ်​သွင်း၍ Achieve ​များ​အြ​ဖစ် ​စု​စည်း​ရန် ​ဆုံးဖြတ်​ပါ​သည်။
© Copyright 2017. All Rights Reserved. Powered by Ideal Technology.